Tele RELAY တစ်ခု - နောက်တစ်နေ့, Xbox ဟာ frame rate နှင့်တင်အဆအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "ဒီလာမယ့်, Xbox ဟာ frame rate နှင့်တင်အဆအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်
နောက်တစ်နေ့, Xbox ဟာ frame rate နှင့်တင်အဆအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုတိုးကနေအိမ်ပြန် consoles စရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကဘာလဲဆိတျကှစာအုပ်ဆိုင်စျနိုငျသလဲ နောက်တစ်နေ့, Xbox အကယ်စင်စစ် frame rate နှင့်တင်အဆအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ3E2019 ထဲမှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ Microsoft ကလာမယ့်မျိုးဆက် console ကိုအပေါ်အလုပ်အတည်ပြုခဲ့သည် Xbox။ ယခုကျနော်တို့ Redmond ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း မှလွဲ. အသစ်ကြားမှာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိကြ၏။ ဒါပေမယ့်စက်အဆင်ပြေအောင်တစ် AMD ၏ Processor, RAM ကို GDDR6 နှင့်မျိုးဆက်သစ် SSDs တပ်ဆင်ထားကြောင်းပုံရသည်။ အဘယ်အရာကိုလက်ရှိမော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်မြင့်မားတဲ့စဉ်းစားပါ။ အဆိုပါကစားသမားမနည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ Microsoft ကပုံရသည် အချို့တိကျသောရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုခငျြ.
နောက်တစ်နေ့, Xbox ဟာ frame rate နှင့်တင်အဆကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုသည်
GameSpot အားဖြင့်မေးသောအခါဤအစိတျအပိုငျးနှင့်အတူ, လာမယ့်မျိုးဆက်, Xbox လေးဆပိုမိုအစွမ်းထက်တဲ့ Xbox One X တို့မှာထက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဖီးလ် Spencer Microsoft ကမှာ, Xbox ဌာနခွဲအကြီးအကဲမကြာသေးမီက console ကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသစ်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အပေါ်အချို့သောရှုထောင့်အပါအဝင်။ ဤသည်ဂိမ်းများကိုအတွက် frame rate နှင့်တင်အကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုကစားသမားတစ်ဦးချောမွေ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအစွမ်းထက်နှစ်မြှုပ်ခြင်း။ "ကျနော်တို့ frame rate နှင့်ဂိမ်းတွေအတွက် Playable အာရုံစိုက်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုဒီလာမယ့်မျိုးဆက်အဘို့အလိုခငျြလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်စွာ load ကြောင်းသေချာစေရန်, သူတို့ကတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးသည် frame နှုန်းသည်နှင့်အတူလှည့်တာသေချာပါစေ။ ထို့နောက်ကြှနျုပျတို့ရှိသမြှအလုပျကို PC ပေါ်မှာပြုသောအမှုများနှင့် developer များကထုတ်လုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်မှာ Windows ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းသောငါတို့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ လူများ, ဂိမ်း 60 fps ကိုချစ်4fps သို့ခေါင်းစဉ် 60K သည်ငါတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်လှည့်။"
အဆိုပါ Xbox One မှာစျေးကွက်အပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သောအခါ frame rate နှင့် resolution ကိုဂိမ်းများကိုအမှန်တကယ်အလွန်အမင်းအမှတ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PS4 ဖို့နှင့်ဤအချက်အပေါ်နှိုင်းယှဉ်အတော်များများကစားသမားသည်ဆိုနီ console ကိုအများကြီးပိုကောင်းလုပ်နေတာခဲ့သည်။ ယခုအဘို့, အဘယ်သူမျှမလာမယ့်မျိုးဆက်, Xbox ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသံသယကြောင့်ပြီးသားမြင့်မားကစားသမားများကမျှော်လင့်ထားသောအခါသိတယ်။ တိုင်း console ကိုအတူသကဲ့သို့, Redmond ကြီးတွေကစားနှင့်၎င်း၏ archrival outdo ဖို့စိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်။
Apex Legends: သံသရဖူ, mode ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အဖွင့ ်. သည်တစ်ခုတည်းကစားသမား
ခွဲထွက်အဖွဲ့ဆဲလ်: Ubisoft လိုင်စင်များ၏ပြန်လာပြင်ဆင်နေသည်
Shenmue 3: အစမ်းသပ်ဗားရှင်းကို PC ပေါ်တွင်စက်တင်ဘာလများအတွက်ကြေညာ
Quand la Corée du Nord finance son programme nucléaire grâce à des cyberattaques lucratives – Cyberguerre